Ny Fitbit Ionic dia manana olana momba ny fampifangaroana sy ny pairing | Androidsis
Fitbit dia nanangana izao tontolo izao ny smartwatch farany antsoina, antsoina Ionic, ary toa tsy dia tsara toa ny noeritreretin'ny maro izy io, raha jerena ireo hafatra navoaka tao amin'ny forum ofisialin'ilay gadget.
Elaela vao namoaka smartwatch tsara i Fitbit. Tonga ny Blaze tamin'ny 2016, ary nanomboka tamin'izay efa ho roa taona no lasa nefa tsy nahita vaovao avy amin'ilay orinasa.
Tamin'ny taon-dasa, Fitbit dia iray amin'ireo orinasa mafana indrindra teo amin'ny tsenan'ny fiambenana fanatanjahan-tena, ary ny Blaze dia iray amin'ireo vokatra tsara indrindra any. Saingy, nandritra ny fotoana naharetan'ny Fitbit Ionic, orinasa maro hafa no namoaka smartwatches mandroso kokoa.
Hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny orinasa ny fijerena ratsy
Ny fomba tsara indrindra hamantarana raha tsara ny fitaovana iray dia tsidiho mivantana ireo dinika ofisialy. Mpampiasa maro no efa nahazo ny tarika Fitbit Ionic, ny sasany talohan'ny daty ofisialy ofisialy (izay ny 1 Oktobra 2017), ary efa mameno olana ireo forum.
Ny marina dia manana olana isan-karazany ny fitaovana vaovao rehetra. Tsy maninona na Samsung, Apple na Amazon io. Ny zava-misy tsotra fotsiny fa misy fitaovana sarotra toy izany eo am-pelatanan'ny olona an'arivony dia mamela mpampiasa roa farafaharatsiny mba tsy hahomby amin'ny fahazoana kapila diso.
Amin'ny ankapobeny, ny Fitbit Ionic dia toa manana olana mitovy amin'izany izay nanimba ny Fitbit Blaze tamin'ny andro voalohany. Ny zava-dehibe indrindra amin'ny lisitra dia ny fiasa hamafana ho azy amin'ny telefaona finday. Ity dia iray amin'ireo fiasa niavaka indrindra nataon'i Fitbit ho an'ny Ionic, saingy olona maro no toa manana olana amin'ny fampifangaroana ny famantaranandro amin'ny findainy.
Amin'ny lafiny iray, ireo mpampiasa koa dia mitatitra olana isan-karazany amin'ny fampandrindrana mozika, izay asa vaovao. Toa sarotra kokoa noho ny tokony ho izy ny fizotrany, saingy nilaza tamin'ny mpampiasa ny orinasa fa tokony hanome azy làlana mandra-pahatongany any.
Ankoatra ny zavatra hafa, toa izany koa marobe amin'ireo fitaovana Android taloha no heverina fa tsy mifanaraka amin'ny Fitbit Ionic. Ny hevitra tsara dia ny hijerena voalohany ny tranonkala ofisialy hijerena mialoha ny fifandraisan'ny findainao amin'ny Ionic, saingy mbola tsy nanavao ny tranokalany ny orinasa hanampiana ny Ionic in latabatra mifanentana.
Ny fanohanan'ny Fitbit dia mety ho tototra amin'izao fotoana izao miaraka amin'ny tatitra momba ny olan'ny mpampiasa, maro amin'izy ireo no milaza fa mahazo valiny mitovy saika isaky ny fotoana, toy ny ilàny manavao ny firmware, manapaka ary manampy ny famantaranandro miverina amin'ny telefaona finday, sy ny hafa mitovy aminy zavatra.
Farany, nilatsaka tamin'ny alahady ny daty ofisialy ofisialin'ny Fitbit Ionic, ka mbola misy ny fanantenana fa hampitombo ny asany sy ny isan'ny agents mandritra ny herinandro ity serivisy fanohanana ny orinasa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ireo mpividy iitone fitbit voalohany dia mitatitra ny olan'ny pairing sy ny pairing
Ny OUKITEL K5000 vaovao miaraka amin'ny bateria 5000 mAh sy ny efijery 5,7 "dia hamidy amin'ny faran'ny volana
Ny OnePlus 6 dia ho tonga amin'ny fiandohan'ny taona 2018 miaraka amin'ny efijery 6-inch tsy misy fefy sy Snapdragon 845